Shiinaha Wanda Qaadista Tayada Sare ee Iftiinka oo aan lahayn ilko loogu talagalay Mini Excavator ama warshad wiish iyo soo saarayaasha | Wanda
Single Row Gudbinta Roller Slewing dhalista
Hal Saf oo Afaraad ah Xidhiidh Kubbadda oo sidata
Qaadista Ball Row Double Sleewing
Seddex Row Roller Sleewing Bearing
Qaadista Qaybta Khafiifka ah
Flange-qaadista nooca Flange
SE Taxanaha Slewing Drive
Sax sax ah dhalista iftiinka typ ...
Nooca Light dhalista Sleeing ...
Saddex u rogo rullaluistemadka ...
isku xigta double kubad kala duwan s ...
Tayada Sare ee Warshadda ...
Wanda Qaadista Tayada Tayada Sare ee Siraha oo aan lahayn ilko loogu talagalay Mini Excavator ama wiish
Nooca iftiinka ee giraanta jeexjeexa wuxuu leeyahay qaab dhismeed isku mid ah oo leh afar dhibic xiriir kubbadeed oo giraan giraanta, laakiin culeysku waa fudud yahay waxaana loo isticmaali karaa qaar ka mid ah codsiyada mashiinnada nuuca nalka ah.
Giraan giraanta dhalidda nalka ayaa si ballaaran loogu isticmaalay codsiyo badan:
>> faahfaahinta soosaarka
Qalabka 1.Raw ee alaab-qeybiyeyaasha lagu kalsoon yahay;
Habka wax soo saarku waa mid si adag waafaqsan nidaamka maaraynta tayada ee ISO9001.
Xakamaynta tayada ku-habboon ee nidaamka iyo 100% kormeerka alaabta ee dhammaatay kahor bixinta;
4.Baadhitaanka alaabada saddexaad waa la aqbali karaa marka la codsado macaamiisha.
5.Adoption habka naqshadeynta wax soo saarka iyo APQP, PPAP, FEMA falanqaynta arjiga.
Warshad Warshad, Dukaamo Dayactir Makiinado
Xiriir afar geesood ah
Hal Row Cross Roller
dhalista la beddeli karo
nalka giraanta dhalaalaya ee giraanta dhogorta mashiinnada cuntada
229-269H (sita dhalista)
Adeegga OEM. Adeegga Naqshadeynta
1.Waxaad tahay warshad ama shirkad ganacsi?
1.Waxaan nahay soo saaraha dhalmada dhoobada iyo wadista gawaarida leh khibrad ka badan 18 sano.
Shirkaddayadu waxay daboolaysaa aag ka badan 20000 mitir murabac.
3.Waxaan haysannaa in ka badan 90 nooc oo mashiinno wax soo saar ah, sida 4m CNC Raceway Qufulka Mashiinka, mashiinka deminta ilkaha ee CNC, Gear
Mashiinka wax lagu shiido, 5m Vertical Lathe iwm. >> 2.Waa maxay faa'iidooyinkaagu marka loo barbar dhigo kuwa kale?
1.Passed ISO9001: 2015, CCS, SGS, shahaadooyinka BV;
Gaarsiinta 2.Waqtiga & gaarsiinta la isku halleyn karo, tayada wanaagsan iyo qiimaha tartanku wuxuu awood u siinayaa shirkadeena inay ilaaliso 30% kordhinta iibka sanadlaha ah;
3.Patented dhalista sallinta iyo gawraca wadista.
4.Passed-ka Nidaamka Hanti-dhowrka iyo sameynta iskaashi lala yeesho shirkadaha adduunka caanka ka ah, sida SANY, SUNWARD, TEREX iwm. >> 3, Sideed u damaanad qaadaysaa waqtiga dhalmada?
Waxaan leenahay jadwal wax soo saar oo adag oo aan ku hayno alaabada moodooyinka caadiga ah si loo hubiyo waqtiga dhalmada.
25-30 maalmood oo loogu talagalay qaabka caadiga ah;
45-55 maalmood oo loogu talagalay moodel gaar ah.
>> Macluumaadka Shirkadda
Fadlan xor u noqo inaad ila soo xiriirto haddii aad wax su'aalo ama shuruud ah qabtid.
Hore: Heerka Cabbirka Khafiifka ah ee Wadista Swing Swing
Xiga: Wanda Double Row Ball Slewing Ring Sita dhalista Ilkaha Ilkaha Ilkaha Dhalista ujeedo Leh
1. Heerkeenna wax soo saar waa sida uu dhigayo heerka mashiinada JB / T2300-2011, sidoo kale waxaa nalaga helay hufnaanta Nidaamyada Maareynta Tayada (QMS) ee ISO 9001: 2015 iyo GB / T19001-2008.
2. Waxaan nafteena u huraynaa R & D of salling slacing customized oo leh saxnaan sare, ujeedo gaar ah iyo baahiyo.
3. Qalab ceyriin fara badan iyo wax soo saar sare oo wax soo saar leh, shirkadu waxay alaabada u siin kartaa macaamiisha sida ugu dhaqsaha badan uguna gaabin kartaa waqtiga macaamiisha ay ku sugayaan alaabada.
4. Xakamaynta tayadayada gudaha waxaa ka mid ah kormeerka koowaad, kormeerka labada dhinac, xakamaynta tayada waxqabadka iyo baaritaanka sampple si loo hubiyo tayada wax soo saarka. Shirkaddu waxay leedahay qalab tijaabo ah oo dhameystiran iyo habka tijaabada ee horumarsan.
5. Kooxda adeegga iibka kadib oo xoogan, oo waqtigeeda xaliya dhibaatooyinka macaamiisha, si ay u siiyaan macaamiisha adeegyo kala duwan.
Afarta Qodob ee Xiriirinta Kubbadda Isbaarada
Qaadista Hal Saf oo Kaliya
Qaadista Slewing For Crane
Dhalista Wareegga Siraha
Dhalista Wareegga Yar ee Swing
Wareegga wareegga giraanta
Caato qaadista dhuuban
Made In Shiinaha Miiraha Sleejka Mashiinka Mashiinka B ...
Wanda qiray Warshadaha Qaybo Slewin ...